Sambo fitsangantsanganana " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Fitsangantsanganana an-dranomasina
Angamba maro no hanaiky fa ny fitsangantsanganana an-dranomasina dia iray amin'ireo karazana fitsaharana sy fitsangatsanganana sy manintona ary manintona indrindra.
Ny antontan'isa dia milaza fa ny ankamaroan'ny olona izay tia an'io endrika fitsaharana io dia tsy sambany manao an'io. Izany hoe, rehefa nandeha sambo fitsangatsanganana indray mandeha, dia aleon'ny olona miverimberina hatrany io endrika fitsaharana io.
Sarotra ny mampita ny fihetsem-po voaray nandritra ny fitsangantsanganana an-tsambo ary mbola sarotra kokoa aza ny mampitaha azy ireo amin'ny zavatra azonao avy amin'ny fomba hafa handaniana ny fialan-tsasatrao.
Ary izany rehetra izany satria ny fitsangantsanganana an-tsambo dia, amin'ny alàlan'ny default, no fomba tsara indrindra sy tsy miraharaha fitsangantsanganana, hahafantatra toerana vaovao, ary hanatrika fitsangatsanganana.
Ny tombony azo amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina, toy izany, dia azo antsoina hoe ny Fahadiovana sy ny Serivisy amin'ny sambo fitsangantsanganana na sambo maotera dia avo lavitra noho ny amin'ny hotely.
Mandritra izany fotoana izany, amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina dia tsy hahazo anao ny fatiantoka rehetra amin'ny fivezivezena eo anelanelan'ny hotely, fa ianao kosa dia hahazo antoka hatrany fa hahazo fahatsapana vaovao avy amin'ny toerana vaovao isan'andro. Ary tsy misy ahiahy ny amin'ny valizy, ny famindrana, ny hipetrahana amin'ny toerana vaovao ary ny vidiny mitovy amin'izany amin'ny dia mahazatra.
Mampiavaka ny fitsangantsanganana an-dranomasina
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina sy ny fitsangantsanganana an-dranomasina na transcontinental dia amin'ny lafiny maro:
Ny fitsangantsanganana an-dranomasina dia fiovan'ny toerana tsy tapaka. Eny tokoa, ao amin'ny ranomasina na any an-dranomasina, dia matetika no mitranga isan'andro isan'andro tsy mahita na inona na inona afa-tsy ny ranomasina manodidina ianao, ary eo am-pitetezana ny ony dia azonao antoka fa hahazo ampahany vaovao amin'ny faritra manodidina anao sy toerana vaovao maro kokoa.
Ny sambo, amin'ny fitsipika iray, dia kely kokoa noho ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo, izay matetika miteraka karazana rivo-piainana saika ao anaty fianakaviana, izay mandray anjara amin'ny fitsaharana milamina kokoa sy ny fananganana olom-pantatra sy fahatsapana vaovao.
Ny sambo fitsangantsanganana, miaraka amin'ny fampiononana anaty, fialamboly, trano fisakafoanana ary zavatra hafa maro hafa, dia mihidy kokoa amin'ny tenany, raha ny sambo fitsangantsanganana kosa dia mifantoka bebe kokoa amin'ny zavatra niainana avy any ivelany, izay tsy isalasalana fa ho tombony lehibe ho an'ny maro.
Tombony azo avy amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina
Ho an'ny olona mora tratry ny hazan-dranomasina, saingy aleony karazana fialantsasatra fitsangantsanganana, azo antoka fa ho be kokoa ny fitsangantsanganana an-dranomasina, satria ny fientanentanan'ny rano ao anaty renirano, ary koa ny mety hisian'ny tafiotra, dia an-jatony heny ambany.
Fijanonana matetika any amin'ny toerana manankarena amin'ny tantara sy ny fahitana.
Toerana mety amin'ny fitsangatsanganana am-pitiavana
Angamba ity no karazana fampahalalana be mpahalala indrindra ary miaraka amin'izay koa ny karazana fitsangatsanganana tsy misy ahiahy sy voalamina
Toy ny fitsipika, ny fitsangantsanganana an-dranomasina dia tafiditra ao avokoa, izay ahafahanao mandoa vola indray mandeha, aza manahy na inona na inona ary tsy ho ferana na inona na inona.
Ny fatiantoka ny fitsangantsanganana an-dranomasina
Ny fiankinan-doha amin'ny toetry ny toetrandro, satria izy ireo dia afaka mametra mandritra ny fitsangatsanganana, ary mety hisy fiantraikany amin'ny fahafaha-mandeha an-tsambo ihany.
Toy ny fitsangatsanganana rehetra, zava-dehibe ny fandehanana ara-potoana, satria raha misy antony manapa-kevitra ny hijanona eo amoron-dranomasina mandritra ny fijanonany dia tsy hiandry anao ny sambo.
Raha ny toe-javatra iainana an'izao tontolo izao amin'ny 2020-2022, noho ny fameperana areti-mifindra sy ny fitsangatsanganana amin'ity taona ity, ny fitsangantsanganana amoron-dranomasina dia lasa fanantenana manintona kokoa ho an'ny fialantsasatra mahafinaritra, izay azo antoka fa tsy mila miala amin'ny tanindrazanao akory ianao.
Saingy ao anatin'ny rafitr'ity dia tokony ho vonona ny hisian'ny fitakiana fitsangantsanganana an-dranomasina ary ilaina ny hikarakarana mialoha io karazana fialantsasatra io.
Noho izany, momba ny fandaminana ny renirano fitsangantsanganana 2021mety mila karakaraina izao!